ngwa: Nkọwa maka ndị mmepe ngwa ngwa | Martech Zone
appFigures: Reportkọ maka ndị mmepe ngwa mkpanaka
ngwa bụ usoro ọnụahịa na - akọ akụkọ maka ngwa mmepe ekwentị na - ejikọ ọnụ ahịa ngwa ahịa ngwa ahịa gị, data mgbasa ozi, nyocha ụwa niile, yana mmelite ọkwa kwa awa. ngwa na-anakọta ma jiri anya ọnụ ọgụgụ na ntanetị budata, nyocha na ọkwa ụwa niile & ọkwa, yana data ndị ọzọ na azịza akụkọ ha.
Jikọọ ọtụtụ ụlọ ahịa - soro ma tulee iOS, Mac, na ngwa gam akporo n'otu ebe.
Akụkọ Email kwa ụbọchị - na onu ogugu di nkpa, tinyere data ahia, nbudata, nbudata mgbasa ozi, na onodu ohuru.
Nhazi ngwa - nsuso maka ọkwa ọ bụla nke ngwa gị, na-edepụta ha niile na ụdị ọ bụla. A na-ewepụ ọkwa site na ngwa ngwa ngwa niile na mmelite kwa awa.
Nkwupụta na Anya - Dokwuo anya ngwa ahịa gị, ihe ntanetị na mmelite na iji ngwa mmekọrịta. Nyochaa ahịa site na ụbọchị, mba, na mpaghara mpaghara niile n'otu ibe.
Onye Mmepụta API - Jiri mmemme were nweta ngwa data gị niile na REST API ma gbasaa ma ọ bụ mepụta ngwa.
Akpaaka Data Importing - bubata data gị ozugbo na ụlọ ahịa.
Sochie Mgbasa ozi n'akụkụ Ahịa - Sochie iAd na AdMob revenue na arụmọrụ nri n'akụkụ ngwa ahịa, si otu ngwaFigures na akaụntụ. Hụ ihe ngosi, pịa, na ndị ọzọ site na mba, ụbọchị, ma ọ bụ ngwa.
Ntụgharị Asụsụ - Gụọ ihe ndị ọrụ na-ekwu banyere ngwa gị yana nyocha niile na ogo ndị atụgharịrị n'asụsụ gị.
Rụkọta ọrụ ọnụ - Jiri nlezianya kekọrịta data gị na onye ọ bụla ma belata ihe data iji mee maka yana ogologo.
Tags: amazon ngwa ogoamazon ngwanlekota oruogo ogoakuko appogo ụlọ ahịangwaapple ụlọ ahịaogo droid ngwagoogle playiOS ngwa ogoiOS ngwa
11 Akụrụngwa dị mkpa maka Post Blog